BBC waxaa ka go'an ilaalinta xogtaada gaarka ah iyo tan qoyskaagaba marka aad isticmaalaysaan adeegyada BBC. Si aad u hesho adeegyada kala duwan ee BBC oo buuxa, waxaa mararka qaar loo baahan yahay in la uruuriyo wararkaaga.
Mar walba oo aad soo gudbiso wararkaas, waxaa sharcigu na farayaa in warkaaga aan u adeegsanno si waafaqsan dhamaan sharciyada UK ee ku saabsan ilaalinta wararka gaarka ah, kuwaas oo uu ku jiro sharciga ilaalinta xogta ee soo baxay 1998.
Boggaga internetka waxay wataan tilmaamo kugu sii xirayo boggag kale oo qayb sadexaad ah. BBC mas'uul kama aha waxa ku qoran boggaga aan BBC ahayn, isticmaalkaaga boggagaas qatarta ka iman karta mas'uul kama ihin.
Marka aad gasho si aad uga qaybqaadato ama si aad u hesho mid ka mid ah adeegyada boggaga kale BBC sida wargaysyada, tartamada, wada sheekaysiga tooska ah iyo guddiyada fariimaha, waxaa dhici karta in aad ku waydiinno warar gaar ah oo kugu saabsan. Waxaa ku jira kara magacaaga, cinwaanka emailkaaga, cinwaankaaga boostada, telephone ama telefoonka gacanta ama taariikhda dhalashada.
Hadii aad galiso faahfaahintaas meelaha lagaa dalbo, waxaad BBC u ogolaanaysaa iyo adeegyadeeda cidda gudbisa in ay kuu soo gudbiyaan adeegyada aad doorato.
BBC waxay kaloo adeegsataa aqbaar kaydiyayaasha (Cookies). Cookie waa qayb yar oo kaydisa wararka ku soo saabsan xulashadaada boggaga, ogolaanaysana in boggaga ay u qaabayso si ku haboon danayntada. Waad ku hagaajin kartaa internet-kaagu in uu aqbalo dhamaan aqbaar kaydiyayaasha, si aad ugu wargaliso marka aqbaar kaydiye la samaynayo ama in aadan heli wax aqbaar kaydiye ah (Cookies).
Si la mid ah, waxaan uruurinaa cinwaanada IP (Cinwaanka IP waa nambar si gaar ah loogu garan karo computer kasta ama qalab kale ee internet-ka loo adeegsado. Waxaan adeegsanaa barnaamijka lafaguridda si uu u eego cinwaanada IP iyo aqbaar kaydiyayaasha, iyadoo ujeedadu tahay in la horumariyo khibradaada adeegsiga. Waxaa kaloo aan u isticmaalaynaa cinwaanka IP si aan u go'aansanno in aad ka soo galayso adeegyada BBC meel gudaha ama dibedda UK ah.
Hadii aad da' ahaan jirto 16 ama ka yar, fadlan soo hel fasaxa waalidkaa ama qofka mas'uulka kaa ah ka hor inta mar walba oo aad wararkaaga gaarka ah galinayso boggaga BBC. Adeegsadayaasha aan haysan ogolaanshaha looma ogolaan doono in ay gudbiyaan warkooda shaqsiga ah.
Sidee BBC u adeegsan doontaa wararka ay kaa uruuriso? BBC oo kaliya waxay isticmaali doontaa aqbaarta gaarka ah sababo dhowr ah awgood oo ay ku jiraan "ujeeddo dhinaca maamulidda adeega ah" taasoo macnuhu yahay in BBC ay dhici karto in ay kula soo xiriirto arrimo ku saabsan adeeg aad ku biirtay.
Waxaa aqbaartaada ay mar walba ahaanaysaa mid qarsoodi ah inta aan ka ahayn meelaha loo baahan yahay in aan la qarin ama sharcigu ogol yahay. Hadii aad galiso ama dirto aflagaado, wax aan haboonayn ama wax aan la ogolayn meel ka mid ah ama bbc.co.uk, BBC waxaa dhici karta in ay aqbaarta gaarka ah ee ay kaa hayso ay u adeegsato in ay joojiso dhaqamadaas oo kale.
Ilaa intee ayay BBC kaydinaysaa wararkaaga? Waxaan haynaynaa aqbaarta kuu goonida ah oo ku jiraya system ilaa iyo inta ay lagama maarmaan u noqoto adeega ay isticmaashay. Meelaha aad wax ku biiriso bogga BBC, waxaa dhici karta sheekadaada sida guud in oo kaliya la hayo intii macquul ee loogu baahan yahay oo la xiriira sababaha markii horeba aad u soo gudbisay. Si aad u hesho aqbaar buuxda oo waqtiga la socota kuna saabsan siyaasadaha Sir dhowridda BBC, fadlan hubi bogga guud ee English-ka:http://www.bbc.co.uk/privacy